Andron’ny vehivavy : voatsipaka ny FATE (+vidéo)
Nahazo fanasana hanotrona ny vadin’i tgv any Morondava ireo vehivavy avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA mandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy rahampitso. Araka ny nambaran’ny solon-tenan’izy ireo anefa dia tsy hamaly izany fanasana izany ry zareo noho tsy fankatoavany ireto mpanongam-panjakana ireto. Nanome fotoana ny mpiara-mitolona rehetra ary izy ireo mba hiara-manamarika izany eo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka ho fanomezam-boninahitra ny « vehivavy tsy mivadi-belirano ».
Hisy arak’izany ny fanentanana maro isan-karazany ankoatra ny kabary politika ifandimbiasana izay tena hampisongadina ny hasin’ny vehivavy mandala ny ara-dalàna. Ankoatra izany dia hotolorana fanomezana ny arivo tonga voalohany eo amin’ny Magro mba ho fahatsiarovana ny andron’ny 08 Martsa 2012. Araka ny nampanantenan’ny depiote Henri Randrianjatovo omaly moa dia hampita hafatra mivantana eo amin’ny Magro ihany koa Lalao RAVALOMANANA vadin’ny Filoham-pirenena mandritra izany hetsika karakarain’ny vehivavy izany.
Hetra : tsy tokony hisy zara vilana (+vidéo)
Takian’ny vahoaka eo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny fitovian-jo eo amin’ny fanefana ny hetra aloan’ny isam-batan’olona. Raha ny fijerin’izy ireo dia tokony averina ihany koa ny 25%n’ny hetra aloan’ny tsirairay raha toa ka atao amin’ny miaramila izany. Nazavan’ny solotenan’ny vahoakan’i Moramanga rahateo fa isan’ny mamelona ny fidiram-bolam-panjakana ny hetra alaina amin’ny karaman’ny olom-pirenena tsirairay indrindra fa ny mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina.
Nampitahainy ihany koa ny famokarana izay ataon’ny miaramila sy ny sivily ary nazavainy fa tsy maharaka ny sivily ny be basy noho izany tsy tokony hamelona ny miaramila no iasan’ny olon-tsotra. Ireto farany rahateo izay tsy mahatsiaro mandry fahalemana na dia « miaro ny vahoaka sy ny fananany » aza no andraikitra voalohan’ny foloalindahy. Rahatoa ka ekena arak’izany ny fitakian’ny miaramila dia hanentana ny olom-pirenena tsy handoa hetra intsony ny eo amin’ny Magro Behoririka.
Olivier Rakotoavazaha : « tsy manana ny fiandrianany i Madagasikara … » (+vidéo)
Nokianin’ny Sekretera Jeneralin’ny antoko MFM teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka androany ny fanitrikitrihan’ny FATE ny momba ny andininy faha-45 ao anaty tondro zotra. Ity andiny farany ity izay fantatry ny maro amin’ny hoe « note explicative » dia mametraka amin’ny toerany ny hasin’ny fitsarana Malagasy sy ny fiandrianan’i Madagasikara. Notsorin’i Olivier Rakotoavazaha anefa fa, ankoatra ny maha-fomba fanao an’izany amin’ny fifanarahana atrehin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena manerana ny tany, dia « efa nitsahin’ny mpanongam-panjakana tamin’ny 2009 ny fiandrianam-pirenentsika ».
Aminy dia izany no dikan’ny namindran’ny miaramila ny fahefana tany amina sivily tsy voafidim-bahoaka ka nanitsahany avy hatrany ny fifandimbiasana demokratika. « Lesona goavana voatanan’ny olom-pirenena Malagasy tsirairay iny ka tsy azo kosehina » hoy izy. Nambarany avy hatrany moa fa tsy azo eritreretina ny mbola hanekena fitondrana miaramila indray ankehitriny taorian’ny porofo mazava amin’ny mety zava-bitan’izy ireo rehefa mandray vola. Sady ny fanaovana izany rahateo dia mbola fanitsahana indray ny fitakian’ny vahoaka Malagasy mitolona ho an’ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA an-tanindrazana.
27/02/2012 : Tsy irery ny Filoha RAVALOMANANA …
« Ireto olona tsy miala eto amin’ny Magro ireto dia manaporofo fa tsy irery ny Filoha RAVALOMANANA » hoy ny solombavam-bahaoakan’ny Beloha Androy. Maro tokoa ny mpanao poltika miaraka amin’ny FATE no tsy manaiky raha ny Filoha RAVALOMANANA irery no « atao olana » eto amin’ny Firenena. Tsy eken’ny mpandala ny ara-dalàna izany satria toa fanaovaan zinona ny fitakian’ny vahoaka tao anatin’ny telo taona. Ny famerenana ny ara-dalàna sy ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA no antom-pisian’ny tolona atrehin’ny « légalistes » ary mbola tsy miala vehana amin’izany izy ireo na dia efa nahita ny karazana famoretana mety azo eritreretina rehetra aza.
« Ny feon’ny vahoaka feon’Andriamanitra » hoy Longin « ary izay mitsipaka izany dia tsy maintsy handray ny valiny ». Nambarany tamin’ny lahateniny teo amin’ny Kianjan’ny Finoana Magro Behoririka fa ny Malagasy ao anatin’ny Faritra 22 eto Madagasikara, eny hatrany ampitan-dranomasina aza, no mitaky izany fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA izany satria tsy azo odian-tsy hita ny zava-bitany tamin’ny fampandrosoana ny Firenena. Ny fanatenan’ny tia tanindrazana dia ny hahafahan’ny Filoha RAVALOMANANA manohy izany asa goavana izany mba hametrahana hoavy mamiratra ho an’ny fara mandimby.
25/02/2012 : Olivier Rakotoavazaha : « hahita ireo atsy ho atsy … » (+vidéo)
Tsy mbola nitsahatra tamin’ny fomba fanaony ny mpanjanaka raha ny fahitan’ny mpanara-baovao azy ankehitriny. Miseho lany etsy sy eroa ny fanehoan-kevitra manaporofo ny teti-dratsy mbola kotrehin’izy ireo. Amin’izao ankatokin’ny faran’ny volana Febroary, fe-potoana nomen’ny SADC, izao dia miezaka mafy ny manely tsaho sy manakivy ny vahoaka Malagasy ireo olona ampiasain’ny Frantsay ireo. Ao ny milaza fa tsy mahomby ny tondro zotra ka tokony mitady vahaolana hafa. Ao ny manamafy fa samy tsy ilaina na ny Filoha RAVALOMANANA na i tgv. Izany rehetra izany anefa dia tokana ihany no tanjona mamelona azy dia ny tsy hiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara.
Volavolam-panintsiana CT - "Amnistie"
Ho an’ny CST Olivier Rakotoavazaha dia tsy tokony hanaiky ho rebireben’ny mpanongam-panjakana ny mpandala ny ara-dalàna. Horakoraka ireny sisa fa ny fandresena dia efa eny am-pelatanana raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny momba ireo lalàna rehetra nadalo tany amin’ny parlemanata isika. Efa mazava rahateo fa tsy hisy fankatoavana iraisam-pirenena ho azo velively rahatoa ka tsy tafaverina an-tanindrazana ny Filoha RAVALOMANANA. Tsy vitan’izany fa dingana lehibe amin’ny fametrahana ny fitoniana izany izany fodiany izany mba hahafahana manohy ny dinika sy mizotra mankany amin’ny fifidianana izay mety ho azo antoka indrindra. « Ny ambiny sisa rehetra dia famendrofendroana ihany » hoy hatrany Rakotoavazaha. Nomarihiny moa fa nezahina nahisatra mafy ny fampidirana ny lalàna momba ny famontsoran-keloka eny amin’ny parlemanta roa tonta saingy tsy maintsy hiroso izany ankehitriny ary ny Ankolafy RAVALOMANANA dia tsy hanaiky raha tsy famotsoran-keloka faobe no lany satria « tsy misy tsy diso izay mandeha amin’ny tany ». « Ao anatin’ny fotoana fohy » hoy ihany Rakotovazaha Olivier «dia hahita ny herintsika izay mibahana ny famotsoran-keloka faobe eo satria tsy te-handamina ny Firenena ».
25/02/2012 : Iza no tena mila « amnistie » ? (+vidéo)
Tsy manan-katokona ankoatra ny raharaha 07 febroary ny mpanongam-panajakana raha ny fiampangana ny Filoha RAVALOMANANA no resahina. Io no hany namoronany porofo ka tereny hitombona na dia hitam-poko hitam-pirenena aza fa nomanina mialoha ny fitondrana vahoaka hatao sorona hanafika lapa. Raha tanisaina ihany koa ny ota sy fady nataon’i tgv sy ny namany tao anatin’ny telo taona dia efa namoizana aina mpiray tanindrazana anetsiny mba tsy ilazana an-tapitrisany. Nanomboka tamin’ny fandrobana izany ka niafara tamin’ny fandatsahan-drà mivantana rehefa nandalo tamin’ny fanonganam-panjakana sy ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena rehetra.
Mazava hoazy fa tsy ny Filoha RAVALOMANANA no mila famotsoran-keloka fa ny mpanongam-panjakana. Noho izany ny fibahanana na ny fanilihana olom-pirenena ao anatin’izany famotsoran-keloka izany dia vao maika handetika an’i tgv any anaty lavaka.
Nitondran’ireo solontenan’ny vehivavy fanazavana teny an-kianja moa ny mikasika io lalàna momba ny famotsoran-keloka io ary nanaovan’izy ireo antso avo ho an’ny tsirairay amin’ny andraikitra izay tokony ho raisina.
22/02/2012 : Rodin Rakotomanjato : « mpandresy ianao … » (+vidéo)
Nanao tatitra mikasika ny zava-misy any anaty andrim-panjakana ny depiote Rodin androany. Izany dia nentiny indrindra nanaporofo tamin’ny vahoaka fa diso tanteraka ny mpamendrofendro sy ny manantsatso. Raha araky ny filazan’ity CST ity manko dia fandresena amin’ny ampahany betsaka ny asa any anaty rafitra. Ireo lalàna rehetra nandalo teny amin’ny parlemanta roa tonta ohatra dia nahitana soritra ny fandresen’ny foto-kevitra izay nitondrana ny tolon’ny mpandala ny ara-dalàna tao anatin’ny telo taona.
Efa nozaraina tamintsika teto fa kasain’ny antenimieran’ny varotra sy ny indostria hamidy ny toerana misy ny Magro eny Ankorondrano. Nambaran’i Rodin Rakotomanjato ary fa nitsipaka izany avy hatrany ny ministry ny varotra Olga Ramalason rehefa nahalala fa efa tapitra ny fe-potoam-piasan’ny biraon’ny CCIAA izay nandefa ny tolo-bidy mikasika ity toerana ity. Araka ny fantatra dia midongy tsy mety miala ireo birao ireo satria efa fomban’ny mpanaraka ny FATE hatrany izany. « Manomboka eto anefa dia ny zanaky ny ara-dalàna no mitondra ny baolina » hoy ny depiote Rodin « ka aoka hahalala oniny ny rehetra ».
18/02/2012 :Henri Randrianjatovo : " Ny hery tsy mahaleo ny Fanahy …" (+vidéo)
Araka ny fampitam-baovao nataon’ny depioten’i Faratsiho Henri Randrianjatovo dia tsy araky ny isan’ny avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA any anaty andrim-panjakana ny herin’ny foto-kevitra izay entin’izy ireo. Raha nanantena manko ny FATE fa ho mora ny handresy azy ireo any anaty parlemanta dia ny mifanohitra amin’izany no mitranga ankehitriny. Hatramin’ny nidiran’ny Ankolafy tao anaty rafitra dia nihatam-bokany hatrany ny asan’izy ireo araka ny tatitra ihany. Vao androany ohatra no nifarana ny fandinihana momba ny lalàm-pifidianana ary nazahoan’ny Ankolafy RAVALOMANANA fandresana mikasika ny fandaniana ny ankamaroan’ny andininy tao anatin’izany lalàna izany.
Mitombo ny tonga saina …
Araka ny nambaran’ity mpikmbana eo anivon’ny filan-kevitra ambonin’ny tetezamita na CST ity dia isan’ny iraka ataon’izy ireo any anatin’ny rafitra ny fandresen-dahatra an’ireo tsy mitovy hevitra. Mahomby izany araka ny nambarany satria raha ny tsangan-tanana androany fotsiny dia 80 mahery no nandresen’ny Ankolafy na dia 30 monja aza ny mpikambana ao amin’ny CST. Tsikaritra ihany koa fa misy ny fifampitondrana efa miha-mahazo laka ao Anosy kely satria na dia ireo tsy nanaiky ny hametrahana ny filoha lefitra faha-fito aza dia mitaky ny hanomezana birao an’i Me. Hanitra Rakotomavo ankehitriny. Manantena arak’izany ny vahoaka fa mandeha tsikelikely saingy tsy ho tara loatra ny fifandresen-dahatra momba ny fahafahan’ny Filoha RAVALOMANANA sy ireo sesitany rehetra mody an-tanindrazana.
18/02/2012 : FATE : rivodoza nandripaka telo taona … (+vidéo)
Mampikaikaika ny mpiray tanindrazana maro ny nafitsoky ny rivodoza Giovanna. Tsy mbola mafy noho ny vokatry ny fanonganam-panjakana anefa izany saingy ny maha-samy hafa azy dia Giovanna voajanahary fa ny FATE natosiky ny frantsay hanongam-panjakana ho fiarovana ny tombontsoany. Mihevitra azy ho madio tsy misy pentina i tgv sy ny namany nefa odiany tsy hita ny olom-pirenena efa namoy ny ainy noho ny krizy natsangany. Ao ohatra ireo very asa ka zara raha mahavelona ny ankohonany. Ao ireo voatery nampitsahatra ny fiaran’ny kilonga noho ny tsy fahampiana sy ny sisa sy ny sisa.
Izany rehetra izany dia famonoana ankolaka sady misoko miadana izay tsy vitan’i tgv ny nisakana azy. Ankehitriny dia zary mahatsiaro ny andro nitondran’ny Filoha RAVALOMANANA ny vahoaka ary mitaky ny fiverenan’izany Filohany izany hampandroso indray ny toe-karena hiadan’ny ambanilanitra.